प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्धामा आज पेशी, कहिले आउँला फैसला ? - Sankalpa Khabar
प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्धामा आज पेशी, कहिले आउँला फैसला ?
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्धामा आज ‘हेर्दाहेर्दै’मा पेसी तोकेको छ । सुनुवाइको सबै प्रक्रिया सम्पन्न गरेको सर्वोच्च अदालत फैसलातर्फ उन्मुख छ । तर आजै फैसला हुने सम्भावना भने छैन । सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सदर गरिदिन्छ कि बदर भन्नेमा राजनितिक वर्गदेखि सर्वसाधारणसम्ममा चासो छ । गत पुस ५ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि सो कदम असंवैधानिक भएको जिकीरसहित सर्वोच्चमा १३ वटा रिट दायर भएका थिए ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा उक्त मुद्दामा रिट निवेदक र सरकारी पक्षको बहस केही दिनअघि सकिएको थियो। त्यसपछि रिट निवेदकका वकिलहरूले जवाफी बहस गरेका थिए।
इजलासलाई राय दिन गठन गरिएको एमिकस क्युरीका पाँच सदस्यहरूले पनि आफ्नो राय दिइसकेका छन्।
इजलासले दुबै पक्षका वकिललाई फागुन १० गतेसम्म बहसको नोट बुझाउन भनेको थियो। दुबै पक्षका वकिलले बहस नोट पेश गरेपछि आज पेशी तोकिएको हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको अनुसार फैसला जुनसुकै बेला आउन सक्छ ।
फैसलापछि राजनितिक माहोल कस्तो हुन्छ भन्नेमा सबैको चिन्ता र चासो छ । केही दिन अघि प्रम ओलीले संसद् पुनःस्थापना भए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइसकेको छन् भने सुरुमै असंबैधानिक भनेको पक्षहरुले समेत पुनःस्थापना नभए आन्दोलन चर्काउने बताइरहेका छन् । यस्ताेमा अदालतको फैसला जे आए पनि राजनितिक माहोल चर्किने र अस्थिर हुने पक्कापक्की जस्तै छ ।
११ फाल्गुन १३:२८
कांग्रेस गम्भीर हुन जरुरी छ: मोहनबहादुर बस्नेत
१३ फाल्गुन १७:१८
प्रचण्ड–माधव समूहले निकाल्यो विजय जुलुस, गुञ्जियो यस्तो नारा
१२ फाल्गुन १३:४१
छात्रा कुट्ने प्रधानाध्यापक पक्राउ
११ फाल्गुन १२:०९
संवैधानिक निकायलाई नथर्काउन प्रधानमन्त्रीलाई डा. कोइरालाको चेतावनी
९ फाल्गुन १४:५१
१४ फाल्गुन १६:४३
सुरक्षा परिषद् बैठक : अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा राष्ट्रिय सुरक्षा…
साताको पहिलो दिन यस्तो छ तपाईको राशिफल
९ फाल्गुन ०६:२४